नक्कली तमसुक बनाएर गरिबसंग ७ गुणा बढी असुली, अदालतले पुर्जी काटेपछि गाउँकै उठिवास !
नक्कली तमसुक बनाएर गरिबसंग ७ गुणा बढी असुली, अदालतले पुर्जी काटेपछि गाउँकै उठिवास !
मलंगवा - एकपटक ऋण दिए पनि पटक–पटक ऋण दिएको कागज गराउँदै ठगेको भन्दै सर्लाहीका विपन्न थारू र मधेसी समुदयाका करिब एक सय ५० जनाको समूह न्याय खोज्दै काठमाडौं आएको छ । सर्लाही मलंगवा–४ का श्यामकृष्ण साह कलवार (श्याम परदेशी)ले सुरुमा दिएको ऋणको ब्याज बुझाउन जाँदा उल्टै अर्कोपटक ऋण दिएको नक्कली कागज बनाएर ठगेको उनीहरूको आरोप छ । एउटै मान्छेको नाममा ऋण दिइएको कानुनी कागज गर्न नमिल्ने भएकाले परदेशीले आफ्ना परिवारका सदस्यका नाममा ऋणीहरूलाई सातवटासम्म कागज गराएको उनीहरूले बताए ।